हस्पिटलको बेडमै बेहुलाले लगाइदिए बेहुलीलाई सिन्दुर, यस्तो छ रोचक कहानी….. – SUDUR MEDIA
हस्पिटलको बेडमै बेहुलाले लगाइदिए बेहुलीलाई सिन्दुर, यस्तो छ रोचक कहानी…..
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी समाज
April 17, 2021 AdminLeaveaComment on हस्पिटलको बेडमै बेहुलाले लगाइदिए बेहुलीलाई सिन्दुर, यस्तो छ रोचक कहानी…..
एजेन्सी । तपाइले हिन्दी फिल्म हेर्ने गर्नुभएको छ भने २००६ मा, सूरज बड़जात्याले बनाएको फिल्म विवाह को बारेमा थाहा छ होला । जसमा दुलही बनेकी अमृता राव आफ्नो बहिनी नाता पर्नेलाई बचाउन आगोमा जल्छिन् । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बेहुला बनेका शाहिद कपूरले उनीसँग विवाह गरे । यो रिलको जीवनको तस्विर हो जुन पनि ठूलो हिट थियो ।
तर वास्तविक जिवनमा यस्तो घटना दुर्लभ हुन्छ । तर भारत यूपीको प्रयागराजमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । यो घ’टना संगम शहर प्रयागराजमा फेला परेको छ । जहाँ भर्खरकी दुलही आरती अस्पतालको खाटमा सुतिरहेकी छिन् र उनको हातमा मेहंदी लगाईरहेकी छिन र उसको छेउमा बसिरहेको युवक उनका पति अवधेश हुन् जो उनकी पत्नीको रेखदेखमा छन् ।
वास्तवमा, प्रतापगढको कुंडा क्षेत्रमा बस्ने आरतीको लागि विवाहको तयारी पूरा भएको थियो र जन्ती आउँदै थियो, तर दिउँसो उनी आफ्नो तीन बर्षे भतिजालाई छतमा खेल्ने क्रममा ब’चाउन छतबाट खसिन् । दुर्घ’टनामा उसको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो र दुवै खुट्टामा पनि स’मस्या छ । घरका साथीहरूले उनलाई प्रयागराजको निजी अस्पतालमा भर्ना गरे।
जब दुलहा अवधेशलाई घ’टनाको बारेमा खबर गयो । घ’टनाको सत्यता र घ’टना पनि दुलहा अवधेशलाई दिइयो । आरतीको घरका मानिसहरूले अवधेशलाई आरतीको कान्छी बहिनीसँग बिहे गर्न भने तर अवधेशले निर्णय गरेका थिए कि आरती उसको जीवनसाथी बन्न सक्छ, जे भए पनि जीवनभर उनलाई सहयोग गर्ने छ।
अवधेशले आफ्नो धार्मिक पत्नी आरतीको पूरा ध्यान राख्छन्। दुबैको साहस र साहसलाई सलाम गरेर नजिकका आफन्तहरू र परिवारका सदस्य पनि खुसी भएका छन् । उही समयमा, आरतीको परिवारले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि उनलाई एम्बुलेन्सबाट कुंडा फिर्ता लगे र विवाह गरे । जहाँ अवधेशले ओछ्यानमा रहेकी आरतीलाई सिन्दुर लगाइदिए ।
त्यसपछि आरतीलाई प्रयागराजको यस अस्पतालमा भर्ना गरियो। अवधेश र आरती अहिले निकै खुसी छन् । समस्यामा छायाँले जस्तै एक अर्काको सहयोगी बनेकोमा । यस्तो अवस्थामा उनीहरू एक अर्कालाई सहयोग गरेर व्यक्तिको लागि उदाहरण बन्न पुगेका छन् । तिनीहरू वास्तविक जीवनको नायक भएका छन्। सबैजनाले दुबैको यो निर्णयले उनीहरूको प्रशंसा गर्दै छन् ।
आफ्नै जन्मदिने बाउले बेचेकी छोरी रुँ’दै आईन् नेपाल, बाउसंग एयरपोर्टमा भेट हुँदा झन्डै हात हालाहाल ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख ०५ गते आईतबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १८ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असार २८ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुलाई १२ तारिख
आफैलाई गा’ली गर्दै जागिर छोडेका प्रेम संजेल आए मिडियामा, भन्छन: पर्यो भने राजनीतिमा पनि आउन सक्छु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
राष्ट्रिय कलाकारलाइ टक्कर दिने स्वर भएकी लक्ष्मी खड्का, चकित पार्ने आवाज ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)…..